Thwebula iTools 3.2.1.0 International; 1.8.4.5... – Vessoft
Le software adingekayo iTunes ukugijima kahle
iTools – a isofthiwe ukusebenza futhi uvumelanise namadivayisi eselula. Isofthiwe usebenza namadivayisi iPod, iPhone, iPad and kusekela esijwayelekile atholakalayo of iOS. iTools ikuvumela ukusebenza izithombe, amafayela alalelwayo izincwadi, uhlele tags, thola lyrics kanye albhamu art on the internet, sisebenze call nomlando njll Esebenzisa Ukunwetshwa ezengeziwe isofthiwe lwenza ukuguqula ngokuzenzakalelayo amafayela video ukuthi ithunyelwa kusuka kwikhompyutha yakho kuya idivayisi yeselula. iTools futhi ikuvumela ukuba ufake, susa futhi isipele isofthiwe.
Ukuvumelanisa ne amadivaysi mobile of Apple
Sisebenze amafayela idivayisi yeselula
Ukuguqula of video amafayela
Backup of amafayela
Amazwana on iTools:
iTools Ahlobene software:
English, Français, Español, Português... Sony PC Companion 2.10.303
English, Español, Português, العربية... WinMend Auto Shutdown 2.1
English, Русский, فارسی, Magyar... Free Dailymotion Download 1.0.87.829